Inona no hatao raha tsy te-handeha ny alikako | Tontolo alika
Inona no hatao raha tsy te-handeha ny alikako
Ny iray amin'ireo fotoana tsara indrindra amin'ny andro dia tonga: mandeha miaraka amin'ny alikao. Esorinao ny fehin-kibo, ary ny fehin-kibo raha toa ka miakanjo izy dia ataonao, sokafy ny varavarana ary manomboka mandeha ianao. Tampoka teo dia tsikaritrao ny fihenjanana kely teo amin'ny tadiny: nipetraka na nijanona tsy nijanona ny namanao. Hitanao eo imasony fa tsy mahatsiaro mandeha izy, izay liana liana satria nandany ny andro tao an-trano izy. Tsia, tsy te handeha izy. Amin'izao fotoana izao, azonao antoka fa manontany tena ianao inona no hatao raha tsy te handeha ny alikako, fahamarinana?
Ny marina dia misy antony maro antony aleon'ny alika manao zavatra hafa. Hiresaka momba azy rehetra isika amin'ity indray mitoraka ity. Aza adino izany.
2 Matahotra tabataba eny an-dalambe izy
3 Matahotra ny mitaingina izy
4 Mahatsapa fanaintainana
Indrindra fa alika alika io, ny zavatra mahazatra indrindra dia ny nijanonany nandeha satria reraka izy. Amin'ireo tranga ireo dia ny zavatra tsara indrindra tokony hatao dia ny mihodina ary modia. Raha bitika kely ny alika, ny tena tsara dia ny fitondrana izany eny an-tananao, fa raha antonony na lehibe izy dia azo ampirisihina hanao dingana farany vitsivitsy amin'ny fitsaboana amin'ny alika sy amin'ny teny toy ny "andao handeha zaza" , "avia andao ary" "Andao mody" hoy tamin'ny feo falifaly.
Matahotra tabataba eny an-dalambe izy
Mateti-pitranga izany raha tsy dia nifandray tsara tamin'ny maha alika kely azy. Ny hataon'ilay alika dia ny manandrana milaza aminao, na inona izany na inona, fa matahotra ny feon'ny fiara sy / na moto izy. Amin'ny ankapobeny ny zavatra hataony dia mimenomenona toa te hitomany, mitsambikina aminao, ary mitaintaina be sy tsy milamina.
Amin'ity toe-javatra ity dia hitodika isika ary ny ampitso dia hanomboka hizatra azy amin'ny feo isika. Tsikelikely, tsy maimaika. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mitondra kitapo misy valisoa tiany isika: saosisy, fitsangatsanganana alika izay misy fofona betsaka (toy ny bacon), na karazan-tsakafo hafa fantatsika fa tiany. Ireto no hataontsika amin'izy ireo: Isaky ny mahita fiara na moto manatona izahay dia hasehontsika amin'ny alika ny fitsaboana sasany, ary rehefa manakaiky ilay fiara dia omena azy ireo izahay. Ka tsy ho ela dia ho azonao fa, na dia mandalo aza ny fiara, tsy misy zavatra hitranga.
Mila fotoana ianao, fa ho hitanao ny tsikelikely ahitanao valiny.
Matahotra ny mitaingina izy
Eny, hafahafa ihany, ny alika dia afaka mahatsapa tahotra tena rehefa mandeha. Ireo biby ireo dia ireo izay tsy nobeazina tsara, izany hoe, fanajana azy ireo, ary izay Azo inoana fa nanana toe-javatra nahatsiravina izy ireo na amin'ny fatorana, eo am-baravaran'ny trano, na an-tongotra.
Mora ny milaza raha matahotra ireo zavatra ireo izy - mila manatona azy ireo fotsiny ianao dia hahita ny fihetsiny. Raha mitebiteby be izy dia tsy maintsy manandrana mampifandray azy rehetra amin'ny zavatra tsara ianao. miaraka amina alika hatrany amin'ny tanana, ary manaja hatrany ny biby eo alohanao.
Raha misy fisalasalana dia manoro hevitra anao aho mba hangataka fanampiana amin'ny mpampiofana alika miasa tsara.
Raha manana fanaintainana amin'ny tongotrao ianao na amin'ny faritra hafa amin'ny vatanao dia tsy te handeha ihany koa ianao. Raha hitanao fa malemy izy, diniho ny tongony Indraindray ny tuso-bolo dia mihitsoka ao am-patany. Mazava ho azy, raha sarotra aminao ny mandeha, dia azo inoana fa nokapohina ianao, noho izany dia mendrika ny mitsidika mpitsabo.
Manantena izahay fa miaraka amin'ireto torohevitra ireto ny alikanao dia te-handeha tsy ho ela 🙂.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » curiosities » Inona no hatao raha tsy te-handeha ny alikako
4 taona ny alikako, tsy te-handeha mihitsy izy, tsy mihaino ahy mihitsy izy, Maltese izy ary tena mahay ao an-trano, fa isaky ny avoakako izy dia toy ny misintona amboaram-bolo aho, izaho tsy mahalala intsony ny fomba hanaovana
Ahoana ny fomba hananatra mafy ny alika
Ahoana no hahalalana raha manana kongona ny alikako